कन्फरेन्सबाट मान र आरओआई Martech Zone
बिहीबार, नोभेम्बर ०,, २०२० शनिबार, जनवरी 12, 2013 Douglas Karr
म गएको पहिलो सम्मेलन क्षेत्रीय औद्योगिक प्रविधि शो थियो। म एउटा अखबारमा औद्योगिक इलेक्ट्रीशियन थिए र मेरो हाकिमले यसको लागि पैसा तिर्ने छैन। यसैले मैले आफ्नै तरिकाले भुक्तान गरें। हामीसँग एउटा कन्वेयर प्रणाली थियो जुन इलेक्ट्रोनिक चुम्बकीय निकटता स्विच थियो जुन उपकरणसँग यति नजिकको मार्जिन हुनुपर्दछ कि उनीहरू वर्षभर टुre्गिने छन्। हामी उनीहरू सयौं मार्फत जान्छौं र प्रत्येक सयौं डलर थियो। शोमा, मैले एउटा कम्पनी फेला पारे जसले उनीहरूको एर्रे सबै आकार, आकार र निकटता दूरी सेटिंग्ससँग बनाई। हामीले नयाँ, कम खर्चिलो सेन्सरको परीक्षण गरेका थियौं जसको फराकिलो खाल थियो ... र फेरि कहिल्यै बदल्नु पर्दैन।
सम्मेलनले हाम्रो कम्पनीलाई हजारौं डलर बचायो, तर मेरो मालिकले प्रवेश गर्न $ २० वा त्यस भन्दा बढी खर्च गरेन। यो मेरो लागि जीवन पाठ हो कि सम्मेलनहरू उनीहरूको तौल सुनको हुन्छ। त्यसोभए यसले मलाई सचेत गराउँछ कि त्यहाँ धेरै कम्पनीहरू छन् जससँग क्षेत्रीय, राष्ट्रिय वा भर्चुअल सम्मेलनमा उपस्थित हुन बजेट पनि छैन! हाम्रो जुमेरंग साप्ताहिक सर्वेक्षणले देखायो कि २ conference% भन्दा बढीसँग कुनै पनि सम्मेलनको लागि कुनै बजेट छैन! सम्मेलनहरू आदर्श मेसिनहरू हुन्। तिनीहरूले केवल उत्तेजित गर्दैनन् किनकि तपाईं साथीहरूले घेरेको छ, तिनीहरूले तपाईंको विचार प्रक्रिया रिचार्ज गर्छन् र तपाईंलाई आफ्नो कम्पनीको कुहिरोबाट बाहिर सोच्दछन्।
राष्ट्रिय सम्मेलनहरू - इमान्दार हुन, म विरलै एक राष्ट्रिय सम्मेलन मा एक सत्र जान्छु! म मेरो समय विक्रेता हलमा खर्च गर्दछु र उद्योग नेताहरूसँग सम्पर्कमा फर्केर र हिंड्दैछु। रातमा, तपाईले मलाई प्रत्येक होटल बारमा भेट्न सक्नुहुन्छ जुन पाहुनाहरूलाई बस्ने गर्दछ। उद्योग नेताहरु संग कुराकानी आश्चर्यजनक छ। यदि तपाइँ तपाइँको कर्मचारीलाई एक राष्ट्रिय सम्मेलनमा जान दिनुहोस्, तिनीहरूलाई एक बार बजेट दिनुहोस् ताकि तिनीहरूले सम्भावित, विक्रेता, वा उद्योग नेतालाई एक वा दुई पिउन सक्छन्। त्यहाँ जादू हुन्छ!
क्षेत्रीय सम्मेलनहरू - यदि तपाईं ठूलो राष्ट्रियता हेर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईं क्षेत्रीय रूपमा ठूलो हुन सक्नुहुनेछ। मलाई क्षेत्रीय सम्मेलनहरूमा अग्रणी सत्रहरू मनपर्छ। यसले मलाई नयाँ प्रस्तुतीकरणहरू एक परिचित श्रोताको साथ परीक्षण गर्ने र स्थानीय प्रतिभा पूरा गर्ने अवसर प्रदान गर्दछ। म क्षेत्रीय सम्मेलनहरूमा सत्रहरूमा जान्छु र प्राय: पेय छोडिदिन्छु। कहिलेकाँही सत्रहरू थोरै स्केचि वा सेल्सिब हुन्छन् ... तर सामान्यतया म जानकारी प्रयोग गरेर टाढा जान्छु। यी सम्मेलनहरू धेरै सस्तो छन्, त्यसैले ROI बनाउन सजिलो छ।
भर्चुअल सम्मेलनहरू - यदि तपाईं विक्रेता वा स्पिकर हुनुहुन्छ भने, भर्चुअल कन्फरेन्सको तुलनामा लगानीमा उत्तम फिर्ता अरू केही हुनेछैन। व्यक्ति यी घटनाहरूमा भाग लिन जान्न र खरीद गर्न। यदि उनीहरूले वक्तालाई भेट्ने कुराको चिन्ता गरे, तिनीहरू सम्मेलनको लागि यात्रा गर्थे। हामीले भर्चुअल कन्फरेन्सबाट बाहिर निस्केको व्यापार (अन्तिम २ कम्पनीहरूको लागि मैले काम गरेको छु) अविश्वसनीय भएको छ। यदि तपाइँ एक सहभागी हुनुहुन्छ भने, यो रमाईलो छ - तपाइँ छोड्न सक्नुहुन्छ, फर्केर सक्नुहुन्छ, तपाइँले चाहानु भएको हरेक प्रदर्शन देख्न सक्नुहुन्छ, र तपाइँको डेस्क (वा सोफे) बाट यो गर्न सक्नुहुन्छ।
सम्मेलन छैन? म इमानदार छु र तपाईंलाई भन्दैछु कि तपाईंको मस्तिष्क (वा यदि तपाईं हाकिम हुनुहुन्छ… तपाईंको कर्मचारीहरूको दिमाग) गाउँदै छ। अफिसबाट बाहिर निस्किनुहोस् र रिचार्ज हुनुहोस्! यदि तपाईं हाकिम हुनुहुन्छ भने, आफ्ना कर्मचारीहरूलाई key प्रमुख रणनीतिहरूसहित फिर्ता आउन चुनौती दिनुहोस् जुन यात्रा खर्च र टिकटको लागतलाई पार गर्नेछ। यदि तपाईं एक कर्मचारी हुनुहुन्छ भने, आफ्नो हाकिमलाई वाचा गर्नुहोस् कि तपाईं key प्रमुख रणनीतिहरूसहित आउनुहुनेछ जुन खर्चलाई उछिनेछ!
सम्मेलनहरू फेला पार्न, मलाई मनपर्दछ प्लान्कास्ट र Lanyrd। मेरो मनपर्ने3ठूला सम्मेलनहरू भएको छ BlogWorld एक्सपो, वेबट्रेंडहरू संलग्नता, र ExactTarget जडानहरू। स्थानीय रूपमा यहाँ इण्डियाना, ब्लग इन्डियाना मनपर्ने छ। र भर्चुअल सम्मेलनहरू - मलाई सबै मन पर्छ सोशल मिडिया परीक्षक घटनाहरू र अन्यहरूको एक टन!
कृपया तपाईंको मनपर्ने सम्मेलनहरू र ती राष्ट्रिय, क्षेत्रीय वा भर्चुअल हुन् टिप्पणी गर्नुहोस्।
टैग: ईमेल मार्केटिंग सम्मेलनबजार सम्मेलनसामाजिक मिडिया सम्मेलन
नोभेम्बर २०, २००। 17::2011 अपराह्न
उत्कृष्ट पोष्ट, डगलस। सम्मेलनहरू अन्य समान दिमागका मान्छेहरूसँग जडान गर्नका लागि असाधारण तरिकाहरू हुन्। म उनीहरूबाट जहिले पनि फर्किन्छु र नयाँ बनाइएका नयाँ जडानहरूको बारेमा उत्साहित र उत्साहित छु। म सामान्यतया कम्तिमा एउटा विचारको साथ पनि फिर्ता आउँदछ जुन मेरो व्यापारमा ठोस प्रभाव पार्दछ। म सबै कम्पनीहरूलाई उनीहरूको कोठामा महत्त्वपूर्ण सम्मेलनहरूमा भाग लिइरहेको छु भनेर निश्चित गर्न प्रोत्साहित गर्दछु।
धेरै जसो सम्मेलनहरूमा प्रवेश मूल्यको राम्रोसँग मूल्यवान् रहेका नेटवर्कि opportunities अवसरहरू बाहेक, विशेष ठाडो बजारमा केन्द्रित प्रयत्नहरू पनि धेरै फलदायी हुन सक्छन्। सीईएस उपभोक्ताहरूको लागि सबैभन्दा नयाँ र सबैभन्दा ठूलो प्राविधिकमा आफैंलाई डुबाउनको लागि उत्कृष्ट छ, तर क्षेत्रीय स्वास्थ्य सेवा सम्मेलनहरूमा सम्बन्ध बनाउने, उदाहरणका लागि, तपाईंलाई स्वास्थ्य सेवा प्रविधिको मार्केटिंगमा भित्री ट्र्याक दिन सक्दछ, जुन अहिले फलिफोर हुँदैछ।
मलाई लाग्छ DittoePR मा हाम्रो PR मान्छे का सीईएस, Zoyd संग केहि राम्रो परिणामहरु छन्। राम्रो सिफारिशहरू!